Madaxweyne Robert Mogabe oo diiday in uu iscasilo – Radio Muqdisho
Tan iyo markii afgembiga uu ka dhacay Dalka Zimbabwe waxaa walaac laga muujinaya mustqbalka dalkaasi oo weli uu jahwareer ka taagan yahay.
Bulshada reer Zimbabwe ayaa rajo ka qaba in xal deg deg ah laga gaaro qalalaasaha siyaasadeed ee uu dalkooda ku jiro, xilli ay mucaaradka, ururada bulshada rayidka ah iyo hogaamiyaasha diinta ku cadaadinayaan madaxweyne Robert Mugabe inuu xilka iska cazilo.
Balse madaxweynaha Dalkaasi Roberta Mogabe ayaa Warar soo baxay sheegayay in uu ka biyo diiday inuu xakunka wareejiyo,taasi oo aan la saadaalin Karin halka ay u biyo shuban doonto
Madaxweynaha South Africa Jacob Zuma oo ay Dowladiisu dhexdhexaadinayso Milatariga dalka afganbiyay iyo Robert Mugabe ayaa sheegay inaysan muuqan xal deg deg ah oo laga gaaro xaaladda Zimbabwe.
Dhanka kale hoggaamiayah mucaaradka adlkaasi Moran Tvangraye ayaa ugu baaqay madaxweyen Mogabe in uu xilka wareejiyo,six al looga gaaromushkiladaha kataagan dalkaasi.
Dadka odoroosa arrimaha siyaasadda dalkaasi ayaa tilmaamaya in hogaamiyahan oo 93 jir ah ee Mogabe uu ugu dambeyn xilka ka degi doono maadaama uu yahay qof da’ah,balse uu doonayo qura in xaaskiisa Grace Mogabe uu u meel deyayo.
Guddig doorashooyinka Soomaaliland”Majiraan wax is dabamarin